iinyanga 9 2 kwiiveki ezidlulileyo #1104 by alogie
Ndandifuna nje ukuzisa. Igama elinguAlistair kwaye ndihlala eMntla Kalifornia. Ndisandul 'ukubuyela kwisimming kwaye ndithenge i-P3Dv4. Kukho itoni ye-freeware ngaphandle apho, kodwa ukuhambelana ne-v4 kunzima ukuqinisekiswa kwezinye iindawo. Ndiyathanda into yokuba ukulandwa kweRioooo yizinto ezisebenzisayo ezizenzekelayo ukuze ndingakhathazeki ngempembelelo yokulahla, i-gauge okanye iifolda zomsindo njl. Ukukwazi ukukhenkca ukucoceka kwakhona ibhonasi. Ukuthengiswa kwe-jumbo kwakungekho-brainer.
Ndiyakonwabela iinqwelo zokuhamba ngeenqwelo zokuthengisa kunye neepropsi ezincinci kunye neejethi. Ukuhlaselwa kwam kwiindawo zokudibanisa zentengiso akusebenzi kakuhle, ngoko kufuneka ndiyisebenzise.
Ndiyathanda ukubhaptizwa ukuze ndidibanise:
Vula iLC Yurophu, i-NA kunye ne-SA
Iindawo zaseScotland, eNgilani naseNorCal ezivela kwi-ORBX.
Ndine-rig egxininci esekelwe kwi-core I5-2500k core quad. Ekubeni ndithenge, ndiphucule i-RAM kwi-16GB, ndafaka i-SSD kwi-OS kunye ne-SSD ezinikezele kwimidlalo, kwaye ndongeze ikhadi le-GTX 1050 Ti. Yenza kakuhle kwi-1680 x i-1050 ilindi.
Ngeenjongo ze-simming ndinayo i-TrackIR 5 kunye ne-HOTAS Cougar (engena-modded ngaphandle kwebhodlela lokutshintshwa kwi-throttle) kunye ne-TMaster zokuhamba ngeenqwelo.
Ixesha ukwenza page: 0.145 imizuzwana